Sida loo masixi Xogta iPad y
Sida loo masixi Xogta iPad
Marka aad baadho 'masixi xog ku saabsan iPad', waxaa laga yaabaa inaad hesho xal ka page natiijada: Settings tuubada app ka screen Home ah> jaftaa Guud> hoos shaashadda oo ka jaftaa celi> tuubada masixi All Content iyo Settings> xaqiijin Kabcada_. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u leeyihiin in ay aad runta sheegto in xogtaasi la tirtiro on iPad la sidan lagu soo kabsaday karaa iyadoo qaar ka mid ah software soo kabashada. Taasi waa in la yidhaahdo sidan ma aha jidkii dhamaystiran masixi xog ku saabsan iPad. Oo haddii aad isku daydo sidan, qaar ka mid ah macluumaadka aad rabto inaad sii sidoo kale waa laga tirtirayaa.
Halkan qodobkan, waxaan doonayaa inaan kula talin qalab ammaan in ay si ammaan ah u tirtiri iPad. Taas oo isticmaalaya SafeErase Wondershare , qalab isticmaala farsamada heerka military si ay u dumiyaan xogta. Iyo waxa la isticmaalayo, waxaad dooran kartaa xogta ku saabsan iPad in masixi. Waxa aad bixisaa 4 fursadaha in ay masixi xog ku saabsan iPad.
1-Guji Nadiifinta: Doorashadan kuu ogolaanaya in aad tirto faylasha log, sawiro / videos files khasnado, Lugood syncing files khasnado, download files meel gaarka, app ahbaa files junk.
Masixi Xogta Gaarka ah: fursadaha waxa aad u saamaxaaya in ay xogta la tirtiro, Safari khasnado, taariikhda Safari, Safari Kukiyada, khasnado keyboard, lifaaqyada fariin, fariimaha, wac taariikhda, qoraalo iyo sawiro.
Masixi tirtiray Files: Qaar ka mid ah files tirtiray weli ka jiraan on your iPad. Doorashadan waxa horumarsan si ay u tirtiri xogta iPad tirtiray. Files taageerayaan yihiin iMessage, xiriirada, wac taariikhda, facetime, jadwalka taariikhda, xusuusinta, qoraalo, Bookmarks Safari, sawiro, iyo videos.
Masixi All Data: Doorashadan waxaa loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo u baahan in la masixi iPad laga iibiyo ama iPad iska. Dhammaan files, oo ay ku jirto aqoonsiga Apple, wac taariikhda, barnaamijyadooda, email, jadwalka, waano, qoraalada, iyo in ka badan waa la si ammaan ah u tirtiri doonaa. Ka dib markii la isticmaalayo Doorashadan in ay si ammaan ah masixi iPad, aad iPad noqon doonaa mid cusub oo aan lahayn xogta shakhsiga ku yaal.
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser
Tallaabada 1. Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Ku rakib oo abuurtaan. Connect aad iPad si aad u computer dhex cable ah digital. Marka xiran si guul ah, waxa aad ka arki kartaa iPad ka muuqan dhanka bidix ee sare ee suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Dooro mid ka mid ah 4 fursadaha aad u baahan tahay si ay u masixi xog ku saabsan iPad. Ka dib ka dibna raac degdeg ah oo ku saabsan barnaamijka dhammayn Kabcada_.
Masixi Xogta iPad Video Tutorial
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah masixi Xogta iPad